Kuwani waxay noqon doonaan hadiyadaha Samsung iyadoo horay loo sii iibsanayo Galaxy Note 8 | Androidsis
Kuwani waxay noqon doonaan hadiyadaha Samsung iyada oo horay loo sii iibsanayo Galaxy Note 8
Samsung waxay xaqiijisay dhowr toddobaad ka hor inay soo bandhigi doonto calankeeda cusub, Galaxy Note 8, soo socota Ogosto 23. Shirkaddu ma aysan xaqiijin goorta ay bilaabi doonto inay horay u sii amarto qalabka ama goorta ay rasmi ahaan u heli laheyd iibsi. Sidoo kale, isagu waxba kamuu sheegin waxa ku saabsan xirmooyinka iibka taas oo la keeni doono iyadoo horay loo sii meeleeyay boosteejooyinka cusub.
Hada, mahadsanid Evan Blass oo caan ah Beat Venture waxaan haynaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan. Bilow, Samsung waxay bilaabi doontaa helitaanka boos celin hore ee Galaxy Note 8 laga bilaabo Ogosto 24, taasi waa, maalinta ka dambeysa soo bandhigideeda rasmiga ah.
Hadiyadaha loo geyn doono iibsadayaasha ugu horeeya, kuwa horey u sii ballansada Galaxy Note 8 ee Mareykanka waxay leeyihiin fursad ay ku kala doortaan kaarka 256GB microSD + xeedho wireless la beddeli karo o kamarad Gear 360 ka soo Samsung.
Waxay u muuqataa taas kuwa nasiibka yar ayaa noqon doona kuwa wax ka iibsada Yurub, halkaas oo Samsung ku siin doono iyadoo la sii iibsanayo Galaxy Note 8 the Samsung DeX, aalad nooca-dock-ka ah oo kuu oggolaaneysa inaad ku isticmaasho moobiilkaaga shaashad dibadeed sida haddii ay PC tahay, iyadoo ay suuragal tahay inaad ku dhejiso kumbuyuutar iyo xitaa jiir
Samsung waxay billowday xeedho wireless ah oo la beddeli karo dhawr bilood ka hor iyada oo lagu qiyaasay qiimaha 90 euro. Ahaanshaha beddelka, taleefanka casriga ah waxaa lagu dhejin karaa si toos ah ama toosan iyadoo suurtagal ah in la sii wado isticmaalkiisa inta lagu amraya
Dhinaca kale, kaamirada Gear 360 (2017) ayaa la bilaabay seddex bilood ka hor iyadoo lagu qiimeeyay 249 euro, 8.4 megapixel dareemayaal sawir iyo awooda lagu duubo fiidiyowyada xalka 4K.
Isla ilo ayaa taas xaqiijinaya Taariikhda Galaxy Note 8 ee la sii deyn doono waxay noqon doontaa Sebtember 15, iyo mowjadda ugu horreysa ee aaladaha waxay u badan tahay inay ka muuqan doonaan Mareykanka, Kuuriyada Koofureed, iyo qaar ka mid ah dalalka Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Kuwani waxay noqon doonaan hadiyadaha Samsung iyada oo horay loo sii iibsanayo Galaxy Note 8
Comio, oo ah shirkad kale oo Shiineys ah oo taleefannada casriga ah soo saarta ayaa suuqa Hindiya ka bilaabay
Bixinta caalamiga ah: ka hel OnePlus 5 bilaash